आगामी आर्थिक बर्षका लागि जारी बजेटबारे पाँचथरका प्रतिनिधि नागरिकका कुरा ! « Phidim Today
आगामी आर्थिक बर्षका लागि जारी बजेटबारे पाँचथरका प्रतिनिधि नागरिकका कुरा !
Published on: 1 June, 2019 2:54 am
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट सार्वजानीक गरेको छ । समग्र क्षेत्रलाई समेटेर करिव १३ खर्बको बजेट सार्वजानीक भएको छ । जारी बजेटले पाँचथर र यहाँका नागरिकका लागि के फाइदा पुग्छ त हेरौँ प्रतिनिधि नागरिकका कुरा ।
१) नरेन्द्रकुमार केरुङ, सभापती, नेपाली काग्रेस
कागलाई बेल पाके जस्तो
यो बजेटबाट जनताले आशा गरेका कुनै पनि समस्याको समाधान हुने देखिएन । बर्तमानमा जनताको इच्छा र आकांक्षा माथि कुठाराघात गर्ने गरी बजेट आएको छ । यो कागलाई बेल पाकेको जस्तो भएको छ । सरकार जसरी अभिनायकबादी चरित्रमा बढेको छ बजेट पनि सोही तवरले ल्याएको छ । जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य बृद्धी भयो त्यसरी नै अरु खाद्यय पदार्थमा पनि सोही तवरको बृद्धी भइरहेको छ । यसले जनतालाई राहात हैन आहात दिइराखेको छ । राजस्वको जो हचुवा अनुमान छ त्यसले हामीलाई समृद्धीमा पुर्याउँदैन । नीजि क्षेत्रलाई पनि सन्तोषजनक हिसावमा समेट्न सकिरहेको छैन । समग्रमा बजेटले अपेक्षा गरे अनुसार उर्जा दिन सकिरहेको छैन । बिदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता निरास छन ।
२) दिपक नेपाल अध्यक्ष पाँचथर उद्योग बाँणिज्य संघ
साना उद्योगिलाई केही सहज भयो
यो बजेटले साना उद्यामीहरुका लागि केही सहज बातावरण बनाएको छ । मुख्य गरेर नीजि क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरेका छौ । यो हाम्रो संस्थागत निणय हो । लोकल लेवलमा खुलेका साना लगानीका उद्योगलाई सहयोग नै हुने खालको बजेट आएको छ । उद्योग गरिरहनुहुनेहरुका लागि राम्रो हो । करको दायराले अरु ब्यवसायीहरुलाई पनि केही सहयोग छ । ठुलै उत्साह मनाउनुपर्ने अवस्था चाहीँ छैन तर निरास नै हुनुपर्ने पनि अवस्था छैन । अघिल्ला बर्षहरु जस्तै हो ।
३) गणेश पोख्रेल अध्यक्ष कृषक समुह महाँसंघ
कार्यान्वयन भए राम्रो छ
कृषकका लागि आशा गर्न लायकको बजेट आएको छ । बजेट जुन उत्साहका साथ आउँछ सोही तवरले कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुरानो परिपाटी हो । यसपटक पनि त्यसै हुने सम्भावना छ । कार्यान्वयन भए त राम्रो छ । कार्यान्वयनलार्य सहज बनाउन सरकारले लचकता अपनाएको कहिले बुझिन्न । यो पटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । बजेट आउने मात्रै भन्दा पनि फेक्जीबल हुनु परो अनि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने हो । कृषिमा धेरै थोक भएको छ । बजेट आएर मात्रै खुसी हुने अवस्था चाहीँ छैन । कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो ।
४) पुन्य सेढाइ सचिव गैरसरकारी संस्था महाँसंघ
ठुला आयोजना मार्फत फाइदा
पाँचथरको सम्बन्धमा ठुला आयोजना मार्फत स्थानीयले फाइदा लिन सक्नेछन । यहाँका कृषक बेरोजगार युवाहरु, शिक्षक सहित सरकारी कर्मचारीमा उत्साह ल्याउनेतवरले बजेट आएको छ । मुख्य गरेर अहिले कृषक मैत्री बजेट आएको छ । यो कृषक र बेरोजगारको पक्षमा आएको बजेट हो । जिल्लाबासीका लागि फाइदाको बिषय भनेको ठुला आयोजनामा बढेको लगानी नै हो । अघिल्लो बर्ष भन्दा केही फरक छ । बिशेष गरेर कृषकका लागि फाइदाबढी देखियो ।
५) हर्क नेम्बाङ मिक्सो, नेता नेकपा
बितरणमुखी भएकाले लोकप्रिय
बजेट बितरणमुखी तवरले आएकाले यो लोकप्रिय बन्ने नै भयो । समग्रमा यो बजेटले सामान्यतया आम नागरिलाई सहज नै भएको छ । प्रभाव पारेको छ । यसले केही न केही सकारात्मक सन्देश छोडेको छ । बितरणमुखी भएकाले यसले दिर्घकालिन असरहरु ल्याउला भन्ने मलाइ लागेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन सहितका कदमहरुमा सहयोग पुग्नेमा हामी बिस्वस्त छौ । सानातिना बिषयलाई पनि समेटेका कारण यसलाई सकारात्मक लिनु पर्छ ।